Yakazara Yega Yekuchengetedza System Vatengesi uye Fekitori | China Zvizere Zvoga Zvekuchengetedza System Vagadziri
Iyo Stacker crane inosvika kune mapallet mumigwagwa yekutsvedza yemativi kune ese mativi. Iyi mhinduro inoderedza iyo yakazara mutengo uku ichipa yakakwira dura yekuchengetedza, uye inoshandisa zvizere nzvimbo yepasi nenzvimbo yakatwasuka.
Iyo shuttle inotakura system ine radio shuttle, vatakuri, maLifts, ma conveyors, racks, control system uye imba yekuchengetera manejimendi. Iyo yakazara otomatiki sisitimu yekunyanyisa yakasimba yekuchengetedza
4-Way shuttle ndeye otomatiki yekubata michina yeiyo yakakwira-sisitimu yekuchengetedza system. Kubudikidza ne 4-nzira yekufambisa kweshuttle uye nhanho yekuchinjisa iyo shuttle neiyo hoist, iyo yekuchengetera michina inowanikwa.